सूचना प्रविधि – Namaste Host News
September 14, 2019 adminLeaveaComment on विदेशी मुद्रा साट्नु छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको विनिमयदर
काठमाडौं -आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ बाहेक सबै देशको भाउ घटेको छ । त्यस्तै आजअमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११३ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ। भने साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ। युएई दिराम एकको खरिददर ३० […]
August 22, 2019 adminLeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओली साढे १ बजे सिंगापुर जाने
काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि आज (बिहीबार) सिंगापुर जाँदै छन् । दिउँसो साढे १ बजेको उडानबाट प्रधानमन्त्री सिंगापुर प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । थाई एयरमार्फत सिंगापुर जाने प्रधानमन्त्री ओलीसँगै प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंहलगायत पनि सिंगापुर जाने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ […]
August 18, 2019 adminLeaveaComment on सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, यस्तो छ आजको बजार भाउ
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आज आईतबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत शुक्रबार प्रतितोला ७१ हजार ५०० रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छापावाला सुनको मुल्य आज ५०० रुपियाँले घटेर प्रतितोला ७१ हजार रुपियाँ कायम भएको हो । महासंघले आज तेजाबी सुन प्रतितोला ७० हजार ७०० रुपियाँ कायम गरेको छ । त्यस्तै, […]
August 18, 2019 adminLeaveaComment on जरिनले सलमानसँग विहे हुन लागेको खुलासा गरिन् !
August 18, 2019 adminLeaveaComment on सबै निजी घरको १० लाखसम्म बीमा गरिने
काठमाडौं । उदयपुरको त्रीयुगा नगरपालिकाले त्रीयुगा सभ्यता र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाका सबै घरको सुरक्षित बीमा गर्ने भएको छ । सुरक्षित घर अभियान चलाउने तयारी गरेको नगरपालिकाले पालिकाभित्र बसोबास गर्ने सबै घरहरुको अनिवार्य बीमा गराई सुरक्षित घर अभियान कार्यक्रम ल्याएको हो । नगरप्रमख बलदेव चौधरीका अनुसार २० हजार ५४ घरधुरी रहेको त्रियुगा नगररपलिकाभित्र करिब ३० प्रतिशत […]
आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर हेर्नेहाेस
August 18, 2019 adminLeaveaComment on आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर हेर्नेहाेस
काठमाडौं–सोमबार एक अमेरीकी डलरको बिक्रिदर ११५ रुपैयाँ ८ पैसा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक अमेरीकी डलरको खरिददर भने ११४ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ । यस्तै एक यूरोको खरिददर १ सय ३२ रुपैयाँ २५ पैसा छ भने बिक्रिदर १ सय ३२ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ । युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय […]
August 17, 2019 adminLeaveaComment on मेघ गर्जन-चट्याङ सहित भारी वर्षा हुने , २ दिन सम्म सचेत रहन अनुरोध !
(रासस) , मनसुनको न्यून चापीय रेखाको पूर्वी भाग (भारतको उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार र पश्चिम बङ्गाल हुँदै बङ्गलादेशको खाडीको शिरसम्मको) औषत स्थानमा रहेकाले सोको प्रभावले नेपालमा मनसुनी वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।महाशाखाले शुक्रबार साँझ मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी विशेष बुलेटिन निकालेर उक्त मौसमी प्रणालीका […]